Mercury | MyLann – Online Restaurants Directory and Food Reviews in Myanmar
Food : 4.43 Decoration : 2.86 Service : 3.43
Price Range - 1000 Ks - 2000 Ks
Opening Time - 6:00am to 5:30pm (open now)
- Burmese Tea (လက်ဖက်ရည်)
- Mutton Pratha (ဆိတ်သားပလာတာ)
- Nan Pyar Salad (နန်းပြားသုပ်)
- Chinese Buns (Pauk Si)
- Kaw Yay Noodles
- Burmese Tea
အနော်ရထာလမ်း နှင့် ၄၆လမ်း(အပေါ်)ထောင့်
Mon 6:00am to 5:30pm
Tue 6:00am to 5:30pm
Wed 6:00am to 5:30pm
Thu 6:00am to 5:30pm
Fri 6:00am to 5:30pm
Sat 6:00am to 5:30pm
Sun 6:00am to 5:30pm
Lucky Seven (49th Street Branch)
Price Range: 500 to 1000
Activities on Mercury
May Kyaw like Mercury6years ago
gineal reviewed Mercury6years ago
Best tea shop in town. Taste is bether than others and fair prices.
mmfoodie uploadedaphoto at Mercury6years ago
Khine Lin uploadedaphoto at Mercury6years ago
Si Thu Thet Naing reviewed Mercury6years ago
It has suitable food for vegetarian.The one I choose when I eat vegetable is stream-rice salad.
Si Thu Thet Naing is eating at Mercury6years ago
Khine Lin is eating at Mercury6years ago
Si Thu Thet Naing Mercury6years ago
mylann Mercury7years ago
Win Zaw Thant reviewed Mercury7years ago
ဒီလက်ဖက်ရည်ဆိုင်က မနက်တိုင်းလိုလို သွားဖြစ်တဲ့ ဆိုင်ပါ။ အရသာက အရမ်းကိုကောင်းလွန်းလို့ တမနက်မစားလိုက်ရရင် ရင်ထဲမှာတစ်မျိုးကြီးဖြစ်ပါတယ်။ :) တစ်ခါတစ်ခါစားတာတွေ မတူပါဘူး။ ထမင်းကြော်နဲ့ဆိတ်ကြော်၊ ပဲနံပြား၊ တိုရှည်၊ အာလူးပူရီ၊ ရှမ်းခေါက်ဆွဲ အမျိုးကိုစုံအောင်စားဖူးပါတယ်။ အဲထဲမှာ အကြိုက်ဆုံးကတော့ ထမင်းကြော်နဲ့ဆိတ်ကြော်ပါ။ ကျစိမ့်လက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်ကတော့ အမြဲလိုလိုပါပါတယ်။5stars ပါပဲ၊ မာကျူရီရေ။
Writeareview for Mercury
Report for Mercury
Reserve table at Mercury